Lifelog 4.0.A.0.28 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.A.0.28 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Lifelog
Lifelog ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျ ယူ. ဘယ်လောက်ကိုသင်အိပ်မည်မျှခြေလှမ်းများနဲ့တူ - ပါ - Smartband နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ lifelog ကိုပုံဖော်သည်သင်အရေးပါအဘယ်အရာကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ကြောင်းအန်းဒရွိုက်များအတွက်လိမ္မာပါးနပ်လှုပ်ရှားမှု tracker တွင် App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျန်းမာရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်နှင့်သင့်အပြုအမူသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရနိုင်တယ်။
lifelog ကိုပုံဖော်သင်သည် သွား. သင်အဲဒီမှာတယ်ဘယ်လိုဘယ်မှာသင်ခဲ့ကြပုံကိုတက်ကြွစွာပြန်ကြည့်မည်သည့်နေ့ရက်တွင်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည်။ အသေးစိတ်အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ Log ။
ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီ app နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့စာရင်းဇယားစုဆောင်းစုစုပေါင်းမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ software ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီဒေတာကိုအဘယ်သူအားမျှသင်တို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Lifelog အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Lifelog အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Lifelog အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Lifelog အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 49.01k 21.32M
Lifelog ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Lifelog အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.0.A.0.28
လက်မှတ် SHA1: 33:0D:F1:D4:F7:79:68:C3:97:FF:53:D4:44:08:9B:B4:6D:C3:30:F1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Sony_Ericsson_E_Application_Signing_Live_864f
Lifelog APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ